Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UDarren Lynn Bousman Usethelwe Ukuqondisa Ifilimu le-'HaLaurie Mansion '
by Waylon Jordan June 10, 2021 2,251 ukubukwa
Kusha impumelelo ye Okokukhipha, ukungena kwakamuva kakhulu ekunwebeni Saw universal, umqondisi UDarren Lynn Bousman ukhuphukele ekusingatheni ifilimu yokuqala kwifranchised entsha ehleliwe eyakhelwe eduze kweLaLaurie Mansion engadumile futhi engokomlando. Le phrojekthi ibhalwa nguChad noCarey Hayes, ababhali befilimu yokuqala ku- I-the conjuring i-franchise.
"Ukujoyina lo msebenzi kuyiphupho kimi," kusho uBousman esitatimendeni esisitholile ekuqaleni kwanamuhla. “Isikhathi eside engikukhumbulayo ukuthi bengikhathazeke kakhulu ngokusebenzelana nemimoya. Noma ngubani ofunda okungaphezu kwemvelo uyazazi izinganekwane nokuhlonishwa kweLaLaurie Mansion. I-grail engcwele yalezi zinhlobo zezindawo. Muva nje ngivunyelwe ukungena endlini, futhi ngakwazi ukuhlala lapho nabafowethu bakaHayes. Ayikho indlela yokuchaza amahora ami angama-72 ngaphakathi kwalezo zindonga. Indlu iyakuqeda. Umlando uyakukhubaza. AbakwaHayes Brothers babhale indaba engokomzwelo, esolisayo, neyethusayo kangangokuba angisakwazi ukulinda ukwethula umhlaba kule ndawo engakholeki. ”
“UDarren akagcini ngokuba ngumqondisi wokudala ngendlela eyisimanga, kodwa futhi uyakwazi nokwakha i-franchise. Sijabule kakhulu ukuba naye kulo, futhi asikwazi ukulinda ukubona ukuthi yini ayilethayo esikrinini, ”kunezela abafowethu bakaHayes.
Isithabathaba somuzi savalwa ukutholwa ngumphakathi kusukela ngawo-1930, kepha lokho akuzange kuvimbe izivakashi ukuthi zigcwale kule ndawo minyaka yonke ukuze zibone amazwibela endlu lapho omunye wabesifazane ababi kakhulu emlandweni, uMadame Delphine LaLaurie, ayehlala futhi ethwala khona ezenzweni zakhe eziningi ezesabekayo. "Ukuzama" kwakhe ngezigqila zakhe ekugcineni kwatholakala, futhi wabaleka ekhaya kungekudala.
Iqembu lamafilimu linikezwe amalungelo akhethekile wendawo ngumnikazi nomkhiqizi uMichael Whalen ukuze angene emlandweni wendawo ngezindlela okungekho muntu owake wazama ngazo manje.
iHorror izokugcina uthumele kulokhu ILaLaurie Mansion projekthi njengoba imininingwane eminingi itholakala.